I-iTunes engcono kakhulu ye-generator card card ikhefu lesipho lesipho iifayili zamahhala
ikhaya // Blog // Free iTunes amakhadi wesipho
I-Legit ne-Free iTunes I-Cards Gift Cards
Into ecacileyo ngobomi kukuba akukho nto enje into efana nesidlo sasemini. Ngaba akunjalo? Hayi, kungekho rhoqo. Ndiyathemba, awunakuncitshiswa yilokho esikubhalile ngoku. Kuthiwani ngokunika isipho ummkeli onenhlanhla into enokuyithandana ixesha elide emva kokuba kuthengiwe, lisongwe, kwaye linikezelwe? Ewe, awudingi i-PhD ukuba wazi ukuba sithetha nge-iTunes Amakhadi eziphoso. Njengamakhulu enu abasenokuba besazi, ubuhle bekhadi lesipho kukuba lungasetyenziselwa ukuthenga nayiphi na i-movie, imiboniso yeTV, ii-apps, iincwadi, imidlalo kunye nomculo wokhetho lomntu. Ngoko, nokuba uyifumana iikhadi zeetunes zamahhala ngenxa yomhlobo wakho okanye umfo ongaqhelekanga, unokuqiniseka ukuba ummkeli onenhlanhla uya kubakho. Umbuzo apha, ngaba uhlawula ixabiso elipheleleyo malunga noko ufuna okanye ukwenzayo i-iTunes ikhadi lesipho kusekho?
Kutheni uhlawule, xa ungayifumana mahhala?
Ukuba usalokhu uhlawula ixabiso elipheleleyo lee-movie, ii-apps, iincwadi, njl, kwi-App Store, uzinikela ukuba ube ngumntwana. Uxolo ukuva ulaka phezu apha, kodwa akukho ndlela engcono yokumanyanisa le ngongoma kwinhloko yabantu. Nangona kunjalo, le ngongoma apha kukuba akudingeki uhlambe i-dollar ngaphezulu ukuze ufumane amakhadi wesipho iTunes ezayo kunye nexabiso elithile leengxowa-mali, ezinokufakwa kwiintlobo ezifunwayo ezifana ne-movie, imidlalo, ii-apps, njl njl. Ukukhohlisa apha kukusebenzisa iTay generator code code ukuzikhulula kwimali exhalabileyo yokuhlawula ixabiso elipheleleyo nantoni na kwi-App Store.
Akunjalo ukuba kulula ukufumana ukusebenza kweetayiti yekhadi yesipho sekhadi lesipho!
Ngoku, oku kungathi kuzwakale isiJamani kuwe, ukuba sele sele uzame umkhosi iTay generator card card kunye nenhlanhla enokufikelela kweli nqanaba. Yikholwa okanye akunjalo, ininzi yabantu abaphuma ngaphandle bayahamba ngomkhumbi omnye. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, kunzima ukufumana isixhobo esisebenzayo kunye nesisebenzayo kwixesha leminyaka nexesha langoku. Nangona ufumene into esebenzayo, uza kufumanisa ukuba akusiyo into engathembekiyo njengoko yayibonakala ekuqaleni. Ngelishwa, yile imeko yeyona nto iTay generators card card kule mihla
Ukuthetha ngokunyanisekileyo, sasingaziwayo kumzabalazo. Sasinaso isabelo sokudumala, ukuxhalabisa kunye nokukhungatheka. Ngexesha elithile, sasicinga ukuba siza kuba ngumntu wokugqibela emhlabeni ukuze afune iikhompyutha zeTunes. Kodwa, kwakukho ukuphazamiseka kokuthakazelisa kwiindaba. Ngenzeka, sasihlangabezane Generator oye wenza inkohliso ngathi ngaphandle kwegridi ye-elbow echaphazelekayo ebandakanyekayo kwixesha lokufumana iikhompyutha zeTunes. Kwakunjengeenombolo zamattery ezibiziweyo, kwaye sasiya esiteji ukuqokelela ihlutha.
Isixhobo sangempela esetyenziswa ngabanye abaninzi!
Ukunquma ibali elifutshane ngapha apha, silapha ukuze sihlanganyele ngokusemthethweni iTay generator code code ezingasetyenziselwa ngabani na ngaphandle ukuba babeke izandla zabo amakhadi iTunes. Ngaba loo nto ivakalekile kwaye ilungile kakhulu ukuba ibe yinyaniso? Bambelela! Asiyikuhlambalaza ixesha lakho nemali. Ijenerethi ekuthethwa ngayo ayisebenzi. Ewe, sele ihlolwe ixesha eliphindaphindiweyo iikhompyutha zeTunes. Uninzi lwabahlobo bethu abasondeleyo kunye namalungu entsapho axhasayo asele asetyenzise isixhobo sethu sityhila. Ngoko, siyazi ngokuqinisekileyo ukuba oku iTay generator card card isebenza njengomlingo.
Ngoko, oko kuthetha ntoni kuwe? Kuthetha nje ukuba kufuneka uqaphele njengoko unako, kwaye usebenzise ithuba elihle ngeli xesha likhoyo. Ngendlela, ngaba sikuxelele ukuba i-generator ayiyi kukuhlawula ipeni? Ewe, i-100% ikhululekile, kwaye ayikhululekile kwintsholongwane kunye nezinye iibhugi ongacinga ngazo. Ngoko ke, sinqwenela ukuphuma evulekile ukuba sikuxelele abafana kulo mthethweni kwaye ngokwenene iTay generator card card, ukwenzela ukuba nina bantu nilisebenzise le ncwadana ye-iTunes ye-gift card.
Akunakusebenza iminyaka yobudala ...
Musa ukwenza iphutha; asiqinisekanga ukuba eli lide kangakanani iTay generator code code uya kusebenza. Sisebenzise i-generators esikhathini esidlulileyo esingazange siphele kwiimarike ixesha elide. Ukuthetha ngokunyanisekileyo, eli liye lasinda ixesha elide. Enyanisweni, sasibonakala sisimangalisa ukuhlala ixesha elide kwi-market card. Ngoko ke, sinokuthi oku i-iTunes ikhadi lesipho isixhobo sinqunywe ngaphezu kwendawo. Kodwa, ungalindelanga ixesha elide okanye mhlawumbi ungaphuthelwa ibhasi kuba sikholelwa ukuba akukho nanye indlela esheshayo nefanelekileyo yokufumana i-iTunes ikhadi lesipho. Lo ungokoqobo.
Kwabo abangazi, i-iTunes ikhadi lesipho uye waba yinto eqhelekileyo yokuhlambalaza abantu abanomphefumlo ococekileyo. Yikholwa okanye cha, amanye amaxhoba alahlekelwe ngamakhulu kunye namawaka eedola kuma-generator fake kunye nokufanayo amakhadi iTunes izixhobo. Ukuba ungumntu ofunda kwenye impazamo, unenhlanhla. Njengoko bethetha, "Indlela efanelekileyo yokugcina ulwazi lwakho lwezezimali ukhuselekile ukuba ungabonakali kwindawo yokuqala." Ngoko, le ngongoma apha kukuba akufanele unikeze nayiphi na idatha yakho iTay generator code code ocela ulwazi lwakho lomntu okanye yemali.
Indlela eqinisekisiweyo nekhuselekileyo yokufumana iikhowudi zeetunes zamahhala!
Ngethamsanqa, i-generator exoxwa ngayo kwisithuba ayifuni ulwazi lwakho lomntu okanye lwezemali ukukunika ukufikelela kwikhadi lesipho samahhala. Ngoko, akukho ukuphulwa kwemithetho yokhuseleko lwe-Intanethi. Njengoko kushiwo ngaphambili, akumele uhlawule nayiphi na into. Ngoko, ungaphezulu komdlalo ngokusuka kwigama ukususela ekubeni awukho nto yokulahleka. Oku kufana nokuba nazo zonke amakhadi ezithandayo. Akukho ndlela onokuyenza ngayo ukunqotshwa. Ngako oko, asinalo ukubeka ingqalelo ekuphakamiseni oku iTay generator card card. Siqinisekile ukuba inokwenza ihlabathi elungileyo kumawaka kunye namawaka amakhadi iTunes nethemba elinomdla ngaphandle. Ngoko, qhubela phambili uze unike isibhozo i-iTunes ikhadi lesipho jenereri ize ihlale. Unokubuya uze usibulele nayiphi na ixesha phantsi kweendlela!
27 Comments " Amakhadi wesipho saseTunes samahhala "
Samsblogs kwi7: 49 am - impendulo
Abahlobo babelane ngalolu hlobo ngokuphindwe kabini, oku kusona sihlandlo esilungileyo endiyifunayo. Ngoku uya kufumana lekhadi lesipho!
Damylooks88 kwi7: 51 am - impendulo
isixhobo ngokwenene !! Ndiyifumene ikhowudi yekhadi yesipho isipho kwaye ndayilungisa ngempumelelo!
Danny kwi1: 57 pm - impendulo
Unayo ikhowudi yam: iphe
Lukas kwi11: 16 pm - impendulo
Unayo ikhowudi yam
ukukhahlela kwi10: 38 am - impendulo
Iikhowudi ze-3 ezikhutshwe ngokukhawuleza, ziya kunika ezinye ezimbini kwintsapho yam
sunny5 kwi11: 34 am - impendulo
Duuuuuuude kwi7: 51 am - impendulo
sean kwi5: 25 am - impendulo
ungxowa-nkulu kwi2: 02 pm - impendulo
Ndiyenza le nto ingenayo
ungxowa-nkulu kwi2: 12 pm - impendulo
GC kwi7: 32 am - impendulo
Yenzelwe kwaye ikhutshwe ngempumelelo ikhadi le-50 $ isipho: ppp
velaaga kwi7: 49 am - impendulo
Inja yo Msindisi kwi8: 01 am - impendulo
Ndiyabulela ngokwenene kuwe
Kerbelly kwi8: 18 am - impendulo
Trekk13 kwi9: 47 am - impendulo
Amazingspoder kwi11: 38 am - impendulo
Barry kwi8: 46 am - impendulo
Ufumene iibhaksi ezininzi ngolu hlobo: p
toro kwi11: 00 am - impendulo
iitunes zamkela ikhodi yam ikhadi lesipho endiyenzileyo
ngumtya kwi8: 57 am - impendulo
Sanarajan kwi8: 53 am - impendulo
777 kwi12: 05 pm - impendulo
suarez kwi4: 33 pm - impendulo
wow u-shit uyinyani
Habo kwi4: 49 pm - impendulo
Ndifuna i-100 $
colio kwi6: 31 pm - impendulo
i-50 khadi ye $ lol 😀
anton kwi4: 54 pm - impendulo
uya kuthenga ii-bucks nayo: p
ku ngabikho kwi2: 58 pm - impendulo
Wons kwi9: 36 am - impendulo